खेल मैदान बनाउँदै कुकुर र बाख्रो मेयर ! - नागरिक रैबार
काठमाडौं । अमेरिकाको एक सहरमा अहिले एउटा कुकुर मेयरको रुपमा कार्यरत छ । मर्फी नामक क्याभेलिएर किंग चार्ल्स जातको उक्त कुकुर भन्दा अगाडि उक्त सहरमा एउटा बाख्रो मेयरको रुपमा थियो ।
सन् २०१८ मा लिंकन नामक बाख्रोलाई उक्त सहरले मेयरको रुपमा चयन गरेको थियो ।
यद्यपि ती जनावर मेयरहरु कार्यकारी भने होइनन्, सम्मानार्थ मेयर हुन् । यसरी बाख्रो र कुकुरलाई मेयरको रुपमा छनोट गर्नुमा उक्त सहरवासी तथा नगर प्रशासनको खास उद्देश्य रहँदै आएको छ ।
सन् २०१८ मा मेयर बनेको लिंकन बाख्रोले झण्डै १० हजार डलर आर्थिक संकलन गरिदिएको थियो । हालको मेयर लिंकनले अहिलेसम्म २० हजार डलर संकलन गरिसकेको नगर व्यवस्थापक जो गुन्टर बताउँछन् ।
जब नगर प्रशासनले मर्फीकी मालिक्नी लिन्डा बार्कर समक्ष लिंकनलाई राजनीतिमा सामेल गराएर मेयर बनाउने कुरा राख्यो तब लिन्डा आश्चर्यमा परिन् । आफ्नो कुकुरलाई मेयर बनाएपछि कुकुरका तस्वीर तथा सन्देश अंकित टिसर्टहरु बिक्री गरेर सहरका लागि अर्थ संकलन गर्न सकिने उनको अपेक्षा थियो । तर विडम्बना कोरोना भाइरस महामारी सुरु भयो ।
त्यसैले टिसर्टको साटो उनले मास्क बिक्री गर्ने योजना बनाइन् । उनले अहिलेसम्म मर्फीको नामबाट १ हजार मास्क बनाएर बेचिसकेकी छिन् । भ्यालेन्टाइन डेमा थप मास्क बनाएर बेच्ने उनको योजना छ । उनले अहिलेसम्म मास्क बेचेरै ५ हजार डलर र र्याफल बास्केट बिक्रीबाट थप उत्ति नै रकम उठाएकी छिन् ।
त्यस्तै उक्त नगरलाई हालै संघीय भूमि तथा जल संरक्षण कोषले ५० हजार डलर अनुदान प्रदान गरेको छ ।
आखिर कुकुर र बाख्रा मेयरले संकलन गरेको आर्थिक सहयोगको उपयोग केमा हुँदैछ त ? वास्तवमा सहरको सामुदायिक खेल मैदानको पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम संकलन गरिएको हो ।
सहरका बालबालिकाहरु मज्जाले खेल्न र मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सकुन् भनेर उक्त सामुदायिक खेल मैदानलाई भव्य ढंगले पुनर्निर्माण गरिँदैछ ।
तर अचम्म त के भने आफ्नै सहयोगमा उठेको रकमबाट बन्ने खेल मैदानमा ती जनावर मेयरहरु भने छिर्न पाउने छैनन् । किनकी सामुदायिक खेल मैदानमा कुकुर तथा बाख्राहरुका लागि प्रवेश निषेध गरिनेछ ।
प्रकृतिसँग हातेमालोः जीवन सुखी र निरोगी
गर्लफ्रेण्डलाई गिफ्ट दिन उँट चोरेपछि…
गर्लफ्रेण्डलाई कस्ता कस्ता गिफ्ट दिनुहुन्छ तपाइँ ? कतिपय मानिसले त आफ्नी गर्लफ्रेण्डलालाई उपहार दिनका लागि मरुभूमिको जनावर उँट समेत चोर्दा रहेछन् । हालै युएइको दुबईमा एउटा यस्तै घटना भएको छ । दुबई प्रहरीले हालै एकजना व्यक्तिलाई निकै बहूमूल्य उँटको बच्चा चोरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । ती व्यक्तिले गर्लफ्रेण्डलालाई उनको जन्मदिनमा उपहार दिनको लागि भन्दै […]
कालो कपाल भएको भन्दै स्कुलमा प्रवेश निषेध, अदालतको आयो यस्तो फैसला
जापानलाई उदाउँदो सूर्यको देश पनि भनिन्छ । संस्कृति देखि लिएर खानपान र अनुशासनको विषयमा जापानीहरु दुनियाँभर चर्चित छन् । मानिसहरु नियम-कानुन कडाइका साथ पालना गर्दछन् । तर एउटा यस्तै नियम त्यहाँको एउटा स्कुलका लागि भने भारी परेको छ । जापानको एउटा स्कुलले खैरो कपाल भएको भन्दै एकजना छात्रालाई स्कुलमा निषेध गरेको छ । कपाल कालो […]
काठमाडौं । प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे । फेब्रुअरी १४ मा पर्ने यो दिवसको खास पर्खाइ हुन्छ युवा–युवतीहरुलाई । प्रेमी–प्रेमिकाहरुले यो दिनलाई उत्सवकै रुपमा मनाउने गर्दछन् । भ्यालेन्टाइन डेका दिन उनीहरु एकअर्कामा आफ्नो प्रेम प्रकट गर्दछन्, प्रेम प्रस्ताव गर्दछन् र सँगै बाँच्ने, सँगै मर्ने कसम खान्छन् । यो वर्षको भ्यालेन्टाइन डे नजिकिँदै गर्दा छिमेकी मुलुक […]
काठमाडौं । उनी स्टन्टका राजा भन्ने उपनामले पनि परिचित छन् । उनी जहाँ जान्छन् विवाद उनीसँगै उब्जिन्छ । नाइजेरियाका प्रिटी माइक नामक एक पुरुषले एकसाथ आफ्ना ६ जना प्रेमिकालाई गर्भवती बनाए । विज्ञापन उनको खास नाम माइक इजी न्वाली न्ओगु हो । गत नोभेम्बरमा अभिनेता विलियम्बस उचेम्बोको विवाह समारोहमा उनले आफ्ना ६ जना गर्भवती […]